မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: သြစတေးလျှ နိုင်ငံမှ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှကြိုဆို
သြစတေးလျှ နိုင်ငံမှ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှကြိုဆို
စီးပွားပိတ်ဆို့မှုဟာ တိုင်းပြည်အင်မတန်နစ်နာပါတယ်။ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကို နိုင်ငံတကာက သူတို့သဘောနဲ့သူတို့လုပ်တာပါ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ခိုင်းဘာဘူး အချို့ နိုင်ငံရေးပါတီများကဆိုပါတယ်။ အမှန်တော့ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေ ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးသမားတွေက LOBBY လုပ်ခဲ့ရတာပါ။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ဘယ်လိုပဲ LOBBY လုပ်လုပ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေက လက်ခံမှဖြစ်တာပါ။ စီးပွားပိတ် ဆို့လောက်အောင် လည်း ဆိုးရွားးတဲ့လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖေါက်မှုတွေ သိသာထင်ရှားဖို့ လည်း လို အပ် ပါ သေးတယ်။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ အာဏာသိမ်းတော့ လူပေါင်းများစွာသေပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလည်း တစ်နိုင်ငံ လုံးမှာ (၇၀၀၀ ) လောက်ရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ နဲ့ ကျောင်း သားများစွာတို. ထောင်ထဲမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စီးပွားပိတ်ဆို့မှုဆိုတာ အဲဒီ ခေတ်အခါက ဖြစ်မ လာခဲ့ပါဘူး။
သိသာတဲ့ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ မြန်မာတွေ အမေရိကမှာ LOBBY လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တာ ပါ။ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုဟာ တိုင်းပြည်ကို ထိခိုက်နစ်နာပေမဲ့။ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖိအားပေးနိုင်တဲ့နည်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ ပြည်သူရဲ့ ရေရှည် အကျိုးစီးပွားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး SANCTION ကို တောင်းဆိုခဲ့ရတာပါ။ ပြည်သူကို စတေးပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတာ ရေရှည်တော့ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ် တဲ့ အတွက် သိသာတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့ကြာရှည်မယ်ဆိုရင် နည်းနာ ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ်ဖြစ် ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ ပါတီအနေနဲ့ကတော့ ပြည်သူကို စတေးပြီး SANCTION ကို ရေရှည် ဆွဲမထားသင့်ဘူးလို့ယူဆ ခဲ့ပြီး စီးပွားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ တောင်းဆိုနေခဲ့တာပါ။
အခုအချိန်မှာ ပြည်သူအများဟာ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ ဆန္ဒပေးသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုဟာ သူ့ခေတ်သူ့အခါ မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေက LOBBY လုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ အရာပါ။ နိုင်ငံရေးသမား နဲ့ ပြည်သူအများစုက စီးပွားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ တောင်းဆိုပါမှ ပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်မှာပါ။
နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာ အလုပ်သမား ၄ သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်ဖွင့်ပါမှ နောက် အနှစ် ၂၀ လောက်ကြာမှ မြန်မာတွေ အားလုံး အိမ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နွားနဲ့လယ်ထွန် ရတာလည်း အနှစ် ၂၀ အတွင်း အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ မနဲလုပ်ရမှာပါ။
ယခု ဘလောက်စာမျက်နှာမှာ စီးပွားပိတ်ဆို့မှု စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေမှာ ၀င်ရောက်ဆန္ဒပြုကြဖို့ ဖိတ် ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ပြည်သူအများပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
SYDNEY — Australia said on Monday it would scale back sanctions against Myanmar in recognition of steps taken by the formerly isolated military regime towards democracy and greater regional engagement.
Foreign Minister Kevin Rudd said Canberra was revising down its sanctions list to remove ex-ministers who had left politics and tourism officials, and members of the new government would "not be listed at this time".
"We hope positive developments, such as the increased participation of opposition parties in the political process, the release of around 220 political prisoners and new labour laws that will legalise trade unions will continue," Rudd said inastatement.
"In this context we will keep our approach to sanctions under review."
Australia applies financial and travel restrictions to certain individuals and there isablanket arms embargo to Myanmar which Rudd said "will remain."
Myanmar's military rulers held rare elections in 2010 and later nominally handed over power to civilians, with outright army rule ending in March.
President Thein Sein --aformer junta general -- has surprised observers by holding talks with democracy icon Aung San Suu Kyi, suspending an unpopular Chinese-backed dam project and attempting to negotiate ceasefires with ethnic rebel groups.
Myanmar has so far failed to meet expectations on the release of political prisoners --akey demand by Western nations that back tough sanctions against the regime -- but Rudd said it had takena"number of important steps".
"There is much progress still to be made in Burma and Australia continues to urge the release of all political prisoners, free and fair by-elections and the peaceful resolution of ethnic conflicts," said Rudd, using the nation's former name.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:58 AM